အာရှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအနေဖြင့် CRAZY RICH ASIANS ရှိသောကြောင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာသည်ကိုမစဉ်းစားပါနှင့် - သတင်း
အာရှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအနေဖြင့် Crazy Rich Asians ရှိသောကြောင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာသည်ကိုမစဉ်းစားပါနှင့်
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အသွင်သဏ္againstာန်အမျိုးမျိုးကိုဆန့်ကျင်ရန်ကျွန်ုပ်ငြီးငွေ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဂျပန်တစ်ဝက်နှင့်ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတစ်ဝက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကို ၁၀၀% အာရှ (DNA စစ်ဆေးမှုမှမဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀% အဖြူဖြစ်သည်) မဟုတ်ပါ။
ငါသည်လည်းလန်ဒန်မှာအရင်ကမနေခဲ့ဘူး၊ ငါဟာအာရှကျောင်းသားတယောက်သာမကဘဲကျွန်တော့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော Crazy Rich Asians ရုပ်ရှင်ကိုသင်တွေ့ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့အားပထမတန်းစားလေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း၊ Covent ဥယျာဉ်ရှိဇိမ်ခံတိုက်ခန်းများတွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များကို Chanel သို့မဟုတ် Louis တွင်ဈေးဝယ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသင်နားလည်လိမ့်မည်။ Vuitton ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်မှာမငြင်းနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောမျက်နှာအသွင်အပြင်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူအခြားလူများကကျွန်ုပ်တို့ဝတ်ဆင်ပုံအားဖြင့်ဤအရပ်မှမဟုတ်ဟုခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူစေသည်။ တစ်ဖက်တွင်ရိုးရှင်းသောဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုလှည့်ပတ်လိုသောခါးပတ်ကြိုးကဲ့သို့သောငါတို့အချို့ရှိပါသည်။ ပိုပြီးအဓမ္မအဆုံးတွင်, သူတို့သည်အဝတ်အဖြစ်တစ်နှစ်တန်ဖိုးရှိကျူရှင်ဝတ်ထားပါတယ်။ ငါသိသလောက်တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသည်ထိုနည်းအတိုင်းဝတ်စားဆင်ယင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကမဆိုလိုပါဘူး တိုင်း တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ မဟုတ်စင်္ကာပူကျောင်းသားများသည်ညစ်ပတ်ပေရေနေသောကြွယ်ဝချမ်းသာသူများဖြစ်သည်။
ပြည်ပမှာပညာသင်တဲ့ကျွန်မနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းအများစုဟာဒူဘိုင်းကလာကြတယ်၊ သူတို့လည်းသူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူဖောင်းတွေများလွင့်စင်သွားတာကိုကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအာရှသားမဟုတ်ဘူး။ ငါနဲ့မတူတာကသူတို့တက္ကသိုလ်ပြန်တက်ရင်မိဘတွေရဲ့ငွေဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးယူဆစရာမလိုပါဘူး။ လူမျိုးရေး၊ တခါတရံကျွန်ုပ် ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံကြောင့်လူများသည်ကျွန်ုပ်သည်တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်သည်ဟုအလွယ်တကူယူမှတ်တတ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်အမေသည် Nissan Altima မောင်းနှင်ခြင်းလား? Kent ရှိလူများအများစုသည် Nissan Micra ကိုမောင်းနှင်သကဲ့သို့?
မိဘတွေငါ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ဘဝကြောင့်ငါကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့မကြိုးစားတော့သလိုအခွင့်အရေးတွေလျှော့ချဖို့လည်းမကြိုးစားဘူး။ ကျွန်တော့်မိဘများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျူရှင်သင်တန်းများနှင့်နေထိုင်မှုစရိတ်များကိုလန်ဒန်တွင်ထောက်ပံ့ပေးရုံသာမကပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လန်ဒန်သို့အရောက်ပို့ဆောင်နိုင်သည့်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကံကောင်းပါသည်။
ဒါ့အပြင်ဒူဘိုင်းနဲ့လန်ဒန်ကြားမှာငါအကြိမ်ကြိမ်ခရီးသွားရင်းငါမှာပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုတာပြတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကငါ့တက္ကသိုလ်သူငယ်ချင်းအချို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက်ယိုငါထင်သောကြောင့်မအံ့သြဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီမှာရှိနေဖို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငါကချမ်းသာရမယ်၊ သို့သော်ထိုသို့အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ။
ဤငွေသည်ကျွန်ုပ်သည်ပထမတန်းစား (ကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမရှိဖူး) အမြဲပျံသန်းနေသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏မိဘများတွင် ၀ င်ငွေအလွန်များသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကျူရှင်ကြေးမှာသူတို့အတွက်ကော်ဖီစျေးနှင့်တူသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အဲဒီအစား၊ သူတို့ကသူတို့ဘယ်လောက်အလုပ်ကြိုးစားတယ်၊ ငါ့ပညာရေးအတွက်သူတို့ဘယ်လောက်သိမ်းဆည်းပြီးဘယ်လောက်ပျော်အောင်ငါအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုတာပြတယ်။
မိန်းကလေး squrt လုပ်နည်း
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်အချို့သည်ငရဲအဖြစ်ကြွယ်ဝပြီးယခုအခါမည်သည့်နေ့တွင်မဆိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကတစ်နေ့ကျရင် Zara ကတ်တလောက်ထဲကထွက်သွားတာနဲ့တူတယ်၊ မင်းကဒီဇိုင်းပညာရှင်လို့မင်းထင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား၊ မင်းကိုအဲဒီနေ့မှာငါဘယ်လိုကြည့်နေသလဲ၊ ငါ့ကိုလူတစ်ယောက်လိုမြင်စေချင်တာကိုပြောစေချင်တယ်။ သူကလမ်းလျှောက်နေတဲ့အိတ်လိုမဟုတ်ဘူး။
The Tab King's မှပိုမိုကြည့်လိုပါသလား? ကြိုက်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာ နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram ကိုလိုက်နာပါ x